musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » CDC: Chero mushonga unogamuchirwa neWHO wakanakira kupinda kweUS
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Mishonga mitanhatu iyo FDA inotenderwa / yakatenderwa kana yakanyorwa kuti ishandiswe nechimbichimbi neWHO inosangana nematanho ekufamba kuenda kuUS.
Mashoko eCDC anouya mavhiki mashoma mushure mekunge White House yati ichabvisa zvirango zvekufamba nendege kubva kumarudzi makumi matatu nematatu.
CDC yakasimbisawo kuti yakanga yazivisa nendege dzakasiyana siyana nezverunyorwa rweCOVID-19 jabs.
Mutauriri weUS Centers for Disease Control and Prevention (CDC) akataura kuti chero mushonga weCOVID-19 unobvumidzwa neWorld Health Organisation (WHO) unobvumidzwa kune vashanyi vekunze vanofamba kuenda kuUnited States.
"Mishonga mitanhatu iyo FDA inobvumidzwa / kubvumidzwa kana yakanyorwa kuti ishandiswe nechimbichimbi neWHO inosangana nematanho ekufamba kuenda kuUS," a CDC mutauriri akadaro, sekureva kwenhau.
Majekiseni akagadzirwa na Pfizer-BioNTech, Dzazvino naJohnson & Johnson parizvino vanobvumidzwa muUS - maviri ekupedzisira pachishandiswa zvekukurumidzira chete - nepo WHO yakatsigira jabs kubva kuAstraZeneca / Oxford, Sinopharm neSinovac kuwedzera kune vatatu vakatodanwa mazita.
Kutaura kweCDC kunouya mavhiki mashoma mushure mekunge White House yati ichasimudza zvirango zvekufamba nendege kubva kumarudzi makumi matatu nematatu, zvakatanga kupihwa kumisa kupararira kweCOVID-33, imwe nguva munaNovember. Nekudaro, panguva iyoyo, haina kutaura kuti majekiseni api anokwanisa.
Gare gare neChishanu, CDC yakasimbisawo kuti yakanga yazivisa nendege dzakasiyana siyana nezvegwaro rakabvumidzwa rejabs, ichiwedzera kuti bazi rezvehutano "richaburitsa mamwe marongero neruzivo sezvo zvinodiwa pakufamba zvapedziswa."
Mutumbi unomiririra vatakuri vemhepo vanoverengeka, Airlines for America, yakasimbisa chirevo ichi, ichiti "yakafadzwa nesarudzo yeCDC yekubvumidza rondedzero yejekiseni inobvumirwa vafambi vanopinda muUS."
Gunyana 9, 2021 pa 19: 26
Chete Comirnaty ndiyo FDA inogamuchirwa. Pfizer-BioNTech iri EUA sezvakaita Moderna neJ & J. Zvakanyatsotsanangurwa mumagwaro eDFA (Chibvumidzo Tsamba, FAQ yeComirnaty (COVID-19 Vaccine mRNA) uye Tsamba Yemvumo (Yakadzoswazve) .Ndakaenda kuzvitoro zviviri zvemushonga uye zvinoita kunge havana kumbonzwa nezveComirnaty.